=လူထုကျန်းမာရေး(လွဲမှားနေသော ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး စနစ်များ)=
၁. သွားတိုက်စဉ် အချိန်ကြာမြင့် စွာတိုက်ခြင်း၊
မကြာခဏ သွားတိုက်ခြင်းဖြင့် သွားရဲ့ အပေါ်ယံလွှာတွေ စားသွား ပြီး နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို သုံးကြိမ်ခန့် သွားတိုက်နိုင်ပြီး အနည်း ဆုံးမနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် တစ်ခါတိုက် လျှင် ၂-၃ မိနစ်ခန့် သာ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂. သွားတိုက်စဉ် ကြမ်းတမ်းစွာ ဖိ တိုက်ခြင်း။
၄.သွားရဲ့မျက်နှာပြင်အားလုံး သွား မတိုက်ခြင်း။
၅.သွားတိုက်ရာမှာ လျှာကို လစ်လျူ ရှုမထားသင့်ပါဘူး။
အကြောင်းက လျှာကလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လို့ပါပဲ။
၆.မိမိနဲ့သင့်တော်တဲ့ သွားပွတ်တံ မရွေး မိခြင်း။
၇. သွားပွတ်တံကို သေချာစွာ ဆေးကြောမှု၊ အခြောက်ခံမှု မလုပ်ခြင်း။
၈. သွားပွတ်တံကို မလဲဘဲ အသုံးပြုခြင်း။
၉.အာလုပ် မကျင်းခြင်း။
လူအများစုက စားပြီး သောက် ပြီးရင် အာလုပ်ကျင်းဖို့ သတိမရတတ်ပါဘူး။ အာလုပ်ကျင်းခြင်းအားဖြင့် အစားအကြွင်းအကျန် တွေကို ဖယ်စေရုံသာမက ကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အက်ဆစ်ဓာတ် ပြင်း ထန်မှုကိုပါ လျှော့နည်းစေပါတယ်။
၁၀. သွားဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန် မစစ် ဆေးခြင်း။
စတဲ့လွဲမှားနေတဲ့ခံတွင်းသန့် ရှင်းရေး ဆိုင်ရာအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်သင့် ပါတယ်။